Budata F1 2021 maka Windows
Budata F1 2021
Budata F1 2021,
F1 2021 bụ usoro ịgba ọsọ Formula 1 nke Codemasters mepụtara.
F1 2021 Budata
Akụkọ ọ bụla nwere mmalite na F1 2021, egwuregwu egwuregwu nke 2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP. Kpoo ihe ohuru ohuru nke F1 2021, tinyere ihe omuma banyere obi uto Braking Point, onye oru abuo abuo, ma rute nso na isi awọ ya na Real Season Start.
Were otu gị gaa nelu nime afọ iri akpọrọ My Team Career mode ma ọ bụ sọọ mpi isi nisi na igwe gbawara agbawa na ọtụtụ mmadụ. Na-emikpu onwe gị na egwuregwu ịgba ọsọ kachasị na ụwa ma merie akwụkwọ mpịakọta nke ndị ọkwọ ụgbọ ala iri abụọ na ndị egwuregwu iri sitere na oge 2021:
Braking Point - Ahụmahụ ọhụụ ọhụụ na-atọ ụtọ
Wayszọ ọhụụ maka igwu egwu - Ọrụ abụọ na-egwu egwuregwu na mmalite oge mmalite, ndị ọkacha mmasị m ọkacha mmasị, ihuenyo na ọtụtụ mmadụ
Egwuregwu Egwuregwu nke 2021 Formula 1 World Championship
Wayszọ ọhụụ igwu egwu - Ọrụ abụọ-ọkpụkpọ na Real Season Start
My Team mode - Mepụta onye ọkwọ ụgbọ ala, họrọ onye na-akwado ya, onye na-ebu injinia, chọta otu onye otu na agbụrụ dị ka Team 11 na ntanetị.
Ba Ọgụgụ Ọnụ amụbaala ugbu a na Ndozi na ihe omume Ngalaba na-akatọ otu.
Kewaa agbụrụ ihuenyo maka egwuregwu abụọ
Nhọrọ ọduọ ịgba ọsọ maka ịgba izu ike ọzọ, na nhọrọ Ọkachamara ọhụụ iji nye ndị egwuregwu egwuregwu aka ịchịkwa
Afọ iri nke Ọnọdụ Ọrụ Nlebara Anya gụnyere Mmelite Nyocha na Mmepe na Mmemme na Mmemme Ọhụrụ
Ala ọzụzụ F1 kachasị mma, Usoro 2, obere, ọkara ma ọ bụ nhọrọ oge zuru oke na 2020, afọ 2021 gụnyere.
Esports - Oghere egwuregwu nime ebe ị nwere ike ịlele ihe omume ntanetị nịntanetị, akụkọ kachasị ọhụrụ, na ọbụlagodi F1 Esports Challenger na Pro Series agbụrụ.
Wayszọ ndị ọzọ ị ga-esi na-asọmpi - Gbanwee mmeri gị na Oge Ọnwụnwa, nhọrọ ogologo oge dị mkpirikpi, Ọnọdụ Grand Prix na isi ihe ndekọ akpaaka na replays zuru ezu (naanị PC).
Mpi online na ọtụtụ: Social na họọrọ agbụrụ, ọhụrụ Ndenye Jikọọ usoro, Njikọ, customizable skins na Weekly Ihe.
F1 2021 Ụdịdị
Kacha ọhụrụ na: 22-07-2021